GreenKhabar – स्वदेशी लगानीबाटै हुन्छ पर्याप्त उर्जा उत्पादन
स्वदेशी लगानीबाटै हुन्छ पर्याप्त उर्जा उत्पादन
in आलेख/विचार / हरित वार्ता — by GreenKhabar —	January 23, 2016
ङादी ग्रुपका निर्देशक शैलेन्द्र गुरागाईं निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष हुन् । गुरागाईले ४.५ मेगावाटको होवा खोला र ५ मेगावाटको सिउरी खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिसकेका छन् । स्वदेशी लगानीकर्तालाई सुविधा दिइएमा स्वदेशी लगानीमै १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने गुरागाईले बताए । उनले स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कारण यसरी सुनाए :
शैलेन्द्र गुरागाई उपाध्यक्ष निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)
०४९को विद्युत् ऐनले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्‍यो । त्यसपछि निजी क्षेत्रले जलविद्युत्लाई पनि लगानीको सम्भाव्य क्षेत्रका रूपमा पहिचान गर्‍यो । साना, मझौला र ठूला जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रले आफ्नो घरबारी नै धितोमा राखेरै भए पनि लगानी गर्न थाले । राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रबाट ३ सय मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना जोडिइसकिएका छन् । तर, सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण यस क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्ता निराश भइरहेका छन् । आयोजना छाडेर हिँडौँ लगानी भइसकेको छ, नछोडौँ आयोजना अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । सबै स्वदेशी लगानीकर्ता यस्तै समस्यामा छन् । राज्यको व्यवहारका कारण यस क्षेत्रमा लागेका कैयौँ लगानीर्ताले आफ्नो घरबार नै गुमाइसकेका छन् ।
स्वदेशी लगानीकर्तालाई हेलाँ गर्ने, तर विदेशी लगानीकर्तालाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने सरकारको विभेदकारी नीति छ । राज्य संयन्त्रका कुनै पनि निकायले स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन हुने गरी काम गरिरहेका छैनन् । स्वदेशी लगानीकर्तालाई जताततैबाट दु:ख दिने, निराश तथा हतोत्साहित बनाउने मात्रै काम भइरहेको छ । स्वदेशी स्रोत र लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न सकिएमा मात्रै मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढ्छ । विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुक कहिल्यै समृद्धि हुन सक्दैन । विदेशी समृद्ध हुन्छन् स्वदेशी हुँदैनन् । यतातर्फ राज्यको जिम्मेवार निकायमा बस्नेको पटक्कै ध्यान जान सकेको छैन ।
विदेशी लगानीकर्ताले निर्माण गर्ने विद्युत् आयोजनाको प्राविधिक, वित्तीय, लगानी जोखिमलगायतका सबै पक्षको विश्लेषण गरी विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) दर तय गरिएको हुन्छ । उनीहरूले माग गरेकै पिपिए रेट दिन सरकार तयार छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले लमजुङमा निर्माण गरिएको ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ । आयोजनाको पिपिए अमेरिकी डलरमा गरिएको छ, त्यो पनि स्वदेशी लगानीकर्तालाई दिएको रेटभन्दा बढीमा । प्रसारण लाइन तोकिएको समयमा निर्माण गर्न नसकिएमा ९७ प्रतिशतसम्म जरिवाना (पेनाल्टी) नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि स्वदेशी लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत मात्रै पेनाल्टीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अनि यस्तो विभेदकारी अवस्थामा स्वदेशी लगानीकर्ता कसरी आकर्षित हुन्छन् ? विगतमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई पिपिए दर ३/४ रुपैयाँ दिँदा विदेशी लगानीमा निर्माण भएका ६० मेगावाटको खिम्ती र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी दोब्बरमा पिपिए गरिएको थियो । उनीहरूको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि पनि ४०/५० वर्ष दिइएको छ । अर्थात् स्वदेशीलाई दिएको भन्दा बढी दिइएको छ ।
राज्यको नीतिले स्वदेशी लगानीकर्तालाई दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ । भनिएको छ स्वदेशी लगानीकर्ता तर व्यवहार दोस्रो दर्जाको नागरिकको छ । स्वदेशी लगानीकर्तालाई विदेशीलाई दिएजत्तिकै पिपिए दर, भ्याट छुट, प्रसारण लाइन, वन वातावरणको सुविधा राज्यले दिन सकिरहेको छैन । विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी बोर्डमार्फत वातावरण, वनलगायतका काम फास्ट ट्रयाकमार्फत गरिने भनिएको छ । तर, स्वदशी लगानीकर्ता यस्तो सुविधा पाइरहेका छैनन् । फास्ट ट्रयाकको व्यवस्था स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि गरिदिनुपर्छ ।
जस्तो लमजुङको मस्र्याङ्दी करिडोरमै चिनियाँ लगानीमा बनिरहेको माथिल्लो मस्र्याङ्दीलाई दिएजत्तिकै सुविधा र सहुलियत दिइएमा त्यस भेगका अन्य स्वदेशी आयोजना सजिलैसँग बन्न सक्छन् । वित्तीय व्यवस्थापन सजिलैसँग हुन्छ । त्यसैले विदेशीलाई दिन तयार भएजत्तिकै सुविधा र सहुलियत दिएमा स्वदेशी लगानीकर्ताले आयोजना सजिलैसँग बनाउन सक्छन् ।
विदेशी लगानीकर्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहितमा कर छुट दिइएको छ । अझ खिम्तीमा त रोयल्टी पनि छुट दिइएको छ । प्राधिकराणले नै रोयल्टी तिरिदिइरहेको छ । आम्दानीमा लाग्ने करमा विदेशी लगानीकर्तालाई स्वदेशीलाई भन्दा बढी सहुलियत (ट्याक्स होलिडे) दिइएको छ । जुन स्वदेशी लगानीकर्तालाई दिइँदैन । तत्कालीन उप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ३ चैत ०६७ मा संसद्मार्फत निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई दिने भनिएको सुविधाको घोषणा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । भ्याटबापत प्रतिमेगावाट १० लाख र पछि बढाइएको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरिएको थियो । घोषणापछि निर्माणसम्पन्न भएका आयोजनालाई यस्तो अनुदान दिनुपर्छ भन्दै माग गरिरहेका छौँ । तर, संसद्मा घोषणा गरिएको सुविधा अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिँदैन भने सरकारलाई कसरी विश्वास गर्ने ?
विदेशीलाई दिनुपर्ने सुविधा राज्यले दिइनै रहेको छ । खिम्ती र भोटेकासीले प्राधिकरणलाई कंगाल बनायो भन्दै कराउँदै हिँडिरहेका छौँ । चिलिमेलाई बढी दर दिएर पिपिए गरिएको छ । चिलिमे स्वदेशी लगानीमा बन्यो । त्यो लगानी स्वदेशभित्रै छ । उसले २ सय ७० मेगावाटका ४ आयोजना अगाडि बढाउन सक्यो । आयोजनास्थलका रसुवावासी धनी भए । स्वदेशीलाई सुविधा दिएर लगानी गरेमा स्वदेशमै धनी हुँदा रहेछन् भन्ने चिलिमेले देखाइसकेको छ । खिम्ती र भोटेकोसी विदेशीलाई बनाउन दिएर को धनी भयो ? त्यसले अरू कतिवटा आयोजना बनायो ? यसको अर्थ खिम्ती र भोटेकासीको विरोध गरेको होइन । तर, दीर्घकालीन प्रभाव राज्यले हेर्नुपर्छ । माथिल्लो मस्र्याङ्दी स्वदेशीले बनाएको भए लमजुङवासी धनी हुन्थे । विदेशीलाई दिएबराबरको सुविधा स्वदेशीलाई दिइयो भने जलविद्युत्मा विदेशी लगानी आवश्यक नै छैन ।
आयोजना निर्माण गर्दा रूख कटानको ठूलो समस्या छ । भौगोलिक रूपमा धेरै टाढा निर्माण भइरहेको आयोजनाले रूख कटानको स्वीकृति लिन सिंहदबार धाउनुपर्ने बाध्यता छ । स्वीकृति लिन मात्रै झन्डै एक वर्ष लाग्छ । यस्तो अवस्थामा आयोजना कसरी निर्माण हुन्छ ? एक वर्ष लगाएर पनि त्यति नै र एक हप्ता लगाएर पनि त्यति नै रूख काट्ने हो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नगर्ने भनेका होइनौँ । प्रक्रिया छोट्याउनुपर्छ भनेका हौँ । स्वीकृतिमा लाग्ने समय घटाउनुपर्छ भनेका हौँ ।
आयोजना निर्माणमा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ आयतमा ज्यादै प्रक्रियागत झन्झट छ । स्वीकृतिमा नै धेरै समय लाग्ने गरेको छ । विस्फोटक पदार्थ समयमा ल्याउन नसक्दा आयोजनाको लागत र समय दुवै बढिरहेको अवस्था छ । आफैँ उत्पादन गर्न सक्ने विस्फोटक पदार्थका लागि पूर्णरूपमा भारतमै निर्भर छौँ । यसलाई स्वदेशमै उत्पादनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसो गर्न नसकिएमा आयात गर्दाको प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाउनुपर्छ ।
विदेशीलाई दिएबराबरको कर छुट, पिपिए दर, आयोजना ढिला भएमा राज्यका तर्फबाट दिइएको ग्यारेन्टीलगायतका सुविधा स्वदेशी लगानीकर्तालाई दिने हो भने १० हजार मेगावाट स्वदेशी पूँजीबाटै बन्न सक्छ । मुलुक समृद्धीको दिशातर्फ अगाडी बढ्छ । नाकाबन्दी हटाउन दवाव दिन विभिन्न मुलकमा गएर जुलुस लगाउनु पर्ने आवश्यकता पर्दैन । तर, राज्यका नीति स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउने खालका मात्रै देखिन्छन् । विदेशी सरह सुविधा दिएमा स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउन सम्भव छ । लगानीकर्ता सक्षम पनि छन् ।
जलविद्युत् क्षेत्रका लगानीकर्ता सबैभन्दा बढी प्रक्रियागत झझन्ट व्यहोरिरहेका छन् । स्वीकृतिमा ब्युरोक्र्याटिक अवरोध ज्यादै छ । आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा गर्नुपर्ने कामलाई ७ मन्त्रालय तथा २३ विभाग धाउनुपर्छ । त्यहाँ जाँदा कर्मचारीबाट हुने व्यवहार र निर्णयमा ढिला गरिदिँदा लगानीकर्तालाई हुने तनाव छुट्टै छ । ती निकायले प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि निरुत्साहित हुने व्यहार मात्रै गर्छन् । लगानीकर्ताको समय आयोजनाको फाइल बोकेर स्वीकृत गराउनमै बित्छ । ३६ वटा कानुनको पालना गर्नुपर्छ । कानुनमा जनाएका प्रतिबद्धताअनुसारको समयमा सरकारी निकायबाट काम हुँदैन । फाइल अड्काएर राख्ने प्रवृत्ति हाबी छ । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत् आयोजनाको विकास कसरी हुन्छ ?
प्रक्रियालाई छोट्याउन एकल डेस्कको माग गर्दै आएका छौँ । संकटकाल लगाएर या नलगाई एकल डेक्सबाट फास्ट ट्रयाकमा निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, ता कि कोठा–कोठामा धाउनु नपरोस् ।
अर्कोतर्फ जलविद्युत् विकासको वाधकका रूपमा अन्तरमन्त्रालय तथा विभागीयहरूबीच समन्वयको कमी नै देखिएको छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वयको कमीले गर्दा वन, वातावरण, अर्थ, स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट जलविद्युत् निर्माणका लागि गरिनुपर्ने काम एवं स्वीकृतिहरू भन्झटिलो, एवं जटिल बन्दै गएको छ । तसर्थ वन, वातावरण, उद्योग, जग्गा प्राप्तिलगायत विषयको सहजीकरणका लागि दु्रत गतिमा निर्णय गर्नका लागि विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत सहभागी गराई एकल स्वीकृति डेस्कको व्यवस्था गरिनुपर्छ